ग्राहक केन्द्रिक वेबसाइटको ग्यारेन्टी गर्ने W तरिकाहरू | Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 15, 2015 अस्वीकार ड्रममंड-डन्
मैले भर्खरै केही कर्पोरेट CPG / FMCG वेबसाइटहरू समीक्षा गरिरहेको थिएँ र मलाई कस्तो झट्का भयो! यी संगठनहरू हुन् जुन उनीहरूको वास्तविक नाममा उपभोक्ताको साथ हुन्छ त्यसैले तिनीहरू सबैभन्दा उपभोक्ता केन्द्रित हुनुपर्छ, हो? हो हो अवश्य!
र अझै तिनीहरू मध्ये थोरैले आफ्नो वेबसाइटहरू सिर्जना गर्दा उपभोक्ताको परिप्रेक्ष्यमा लिन्छन्। कम कम्तिमा पनि मलाई उनीहरूको वेबसाइटमा फर्कन चाहेकोमा कम्तीमा पनि चाँडै खुशी!
मेरो धेरै साइटहरूको समीक्षाबाट, यस्तो देखिन्छ कि प्रायः संगठनहरूले उनीहरूको वेबसाइटहरू उनीहरूका ग्राहकहरूसँग सेयर गर्नको लागि बनाउँदछन्। यद्यपि यो जानकारी हो तिनीहरूले सेयर गर्न चाहानुहुन्छ, उनीहरूका ग्राहकहरु लाई के मन पर्छ।
यसले मलाई वेबसाइटमा समावेश गर्न ग्राहकको दृष्टिकोणबाट के महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बारे सोच्न लगायो। यहाँ मेरो सात चीजहरूको सूची छ, तर म तपाईंको आफ्नै विचारहरू वा थप टिप्पणीलाई तलका टिप्पणीहरूमा स्वागत गर्दछु।
वेबसाइटमा हुनुपर्दछ Th चीजहरू
एक स्पष्ट संरचना त्यो छ सहज। तपाईंले अझै पनि तिनीहरूका लागि साइटम्याप समावेश गर्नु पर्छ जसलाई थप मद्दत चाहिन्छ वा जसको खोजीमा कम तार्किक छन्।
सम्पर्क पृष्ठहरू पत्ता लगाउन सजिलो, वा गृह पृष्ठमा पूरा कम्पनी विवरणहरू। यसमा टेलिफोन नम्बर, ईमेल, हुलाक र सडक ठेगानाहरू, र सामाजिक मिडिया आइकनहरू समावेश गर्नुपर्दछ। तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्दछ कि यी दिनहरू, ग्राहकहरू प्राय: वेबसाइटमा जान्छन् ब्रान्ड वा कम्पनीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने बारे जान्न। त्यसैले तिनीहरूलाई को लागी सकेसम्म सजिलो बनाउनुहोस्।
तपाइँको ब्रान्ड, उत्पादन र सेवाहरूको एक सूची। किनभने ग्राहकहरूले कोटीहरू भन्दा पहिले ब्रान्ड सोच्छन्, उनीहरूको छविहरू समावेश गर्नुहोस्, प्रासंगिक विवरणहरूको साथ जस्तै प्याक सामग्री र सामग्रीहरू। उपयोग सुझावहरू जोड्नुहोस्, विशेष गरी यदि त्यहाँ कुनै सीमितताहरू छन्, र कहाँ फेला पार्ने बारेमा जानकारी, विशेष गरी यदि वितरण प्रतिबन्धित छ। यी न्यूनतम तथ्यहरू समावेश गर्न सकिन्छ, तर पक्कै पनि तपाईंले थप विवरणहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई थाँहा छ तपाईंको रूचि र महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तपाईंको ग्राहकहरूको लागि थाहा पाउन।
एक अनुभाग को बारे मा कम्पनी विवरण दिखाने को लागी, यसको प्रबंधन टीम सहित - (मात्र) गैर कार्यकारी निर्देशकहरु। यदि तपाईं एक ग्लोबल कम्पनी हुनुहुन्छ भने, भौगोलिक क्षेत्रहरू तपाईंले कभर गर्नुभयो थप गर्नुहोस् र गृहपृष्ठमा भाषाहरूको विकल्प प्रस्ताव गर्नुहोस्। कम्पनी मिशन बयान, यसको मान, रणनीति र संस्कृति पनि साझा गर्न र ग्राहकहरु को लागी एक सकारात्मक छवि निर्माण गर्न मद्दत को लागी महत्वपूर्ण छ। जे होस् तपाईसँग पत्रकार र लगानीकर्ताहरूको लागि मिडिया सेक्सन हुनुपर्दछ, ग्राहकहरू पनि उनीहरूको मनपर्दो ब्रान्डहरू के हुँदैछ भनेर जान्न मनपराउँदछ, त्यसैले भर्खरका कथाहरूको साथ समाचार खण्ड थप्नुहोस्।
ग्राहकहरूको दृष्टिकोणबाट मूल्यवान सामग्री। साइट नियमित रूपमा अपडेट हुनुपर्दछ र वेब-अनुकूल छविहरूको साथ क्रस-ब्राउजर अनुकूलता हुनुपर्दछ। फोटो र भिडियोहरू वेबको सबैभन्दा लोकप्रिय तत्वहरू मध्ये एक हो, तिनीहरूलाई समावेश गर्नुहोस् वा तपाईंको ग्राहकहरूलाई उनीहरूको थप्न आमन्त्रित गर्नुहोस्।
पुरिना आफ्नो प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पादित सामग्री को लागी एक राम्रो मनपर्ने साइट बन्न पुगेको छ, जसमा यसले आफ्नो भर्खरको TVC र प्रिन्ट विज्ञापन पनि थपेको छ। व्यक्तिहरू हेर्न, टिप्पणी गर्न र नयाँ सामग्री साझा गर्न मनपराउँदछन्, त्यसैले तिनीहरूलाई गर्न सजिलो बनाउँनुहोस् र नियमित रूपमा भर्खरको समाचारको लागि फर्कने अपील गर्नुहोस्।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरूका साथ एउटा FAQ खण्ड। यो क्षेत्र पनि नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक हुन्छ हेरचाह लाइनहरू र ग्राहक सेवा टोलीमा आएका प्रश्नहरूको साथ।
उपयोगिताहरू जस्तै खोज, साइन अप र सदस्यता फारमहरू, र तपाइँको ग्राहकहरूको लागि एक आरएसएस फिड सार्थक हो, तिनीहरूलाई तपाइँको साइट को सामग्री को सक्दो फाइदा लिन मद्दत गर्न। थप रूपमा, ट्र्याकि and र विश्लेषण कोडहरूले तपाईंलाई कहाँ र कुनमा तपाईंको ग्राहकहरूले प्राय: हेर्दछन् भन्ने अनुसरण गर्न सक्षम गर्दछ। यसले तपाईंको ग्राहकलाई सीधा सोधेर प्राप्त गरेको भन्दा बढी जानकारी प्रदान गर्दछ, कुन अंशहरूमा संशोधन वा प्रतिस्थापन आवश्यक छ।
प्रेरणा को लागी एक राम्रो उदाहरण
एउटा राम्रो कर्पोरेट वेबसाईट जुन म भेट्टाएको छु र जुनसँग कुराकानी गर्न धेरै रमाईलो पनि हो, साइट हो रेकिट बेन्कीइजर। यसले वास्तवमै मलाई चासो देखायो र केहि समयको लागि र धेरै फरक क्षेत्रहरूमा व्यस्त रह्यो। उदाहरण को लागी, यसको ब्रान्ड र तिनीहरूको लोगो को सामान्य सूची को सट्टा, यसले यो के भन्छ भनि देखाउँदछ पावरब्रान्ड एक रिटेल शेल्फमा वा भर्चुअल घरको कोठामा लाइन-अप प्रदर्शित हुन्छ (म स्वीकार गर्दछु ध्वनि प्रभावहरूले केही हदसम्म मलाई चिढचिढो बनायो, तर तपाईं तिनीहरूलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ)। तपाईं त्यसपछि उत्पादको तस्वीरमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यसमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न, कोटी र यसको पछिल्लो विज्ञापन।
आमन्त्रित श्रोताको सहभागिताले सबै ब्राण्डमा उनीहरूको बारेमा थप जानकारी लिन क्लिक गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। र रेकिट बेन्कीइजर कर्पोरेट जगतको अन्तर्क्रियात्मक प्रदर्शनहरू, खेल र चुनौतीहरूको थप मार्फत उपभोक्ताहरूलाई मात्र होइन, विगत, वर्तमान र सम्भावित कर्मचारीहरूलाई थप अपील गर्दछ।
माथी लिंक गरिएको तिनीहरूको साइटमा हेर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको आफ्नै कर्पोरेट वेबसाइटसँग तुलना गर्नुहोस्। तपाई कुनमा समय बिकाउन चाहानुहुन्छ? के तपाईंको साइट कर्पोरेट वा ग्राहक केन्द्रित एक हो? के तपाइँसँग तपाइँको आफ्नै वेबसाइटको लागि माथि उल्लेख गरिएका सबै सात चीजहरू छन्? यदि होईन भने, यो पहिले ग्राहकलाई सोच्ने समय हो।
डेन्सेसँग नेस्ले, जिलेट र फिलिप मोरिस अन्तर्राष्ट्रियसँग वरिष्ठ कार्यकारी भूमिकामा years० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ। उनीले सेन्ट्रसिटीका अध्यक्ष र संस्थापक हुन्, विश्वव्यापी परामर्श जसले अरबौं डलर ब्रान्डको कार्यकारी टोलीलाई रणनीतिक सल्लाह प्रदान गर्दछ। उनको भर्खरको किताब विजेता ग्राहक केन्द्रिता अब उपलब्ध छ।